Bakhala Ngemfuyo Ehlukunyezwa Umsindo Abanikazi Bamapulazi – eHowzit
Bakhala Ngemfuyo Ehlukunyezwa Umsindo Abanikazi Bamapulazi
ABANIKAZI bamapulazi akhele inkundla yezemidlalo yaseGamalakhe okuyi Ugu Sport and leisure Centre sebezwakalise okukhulu ukungagculiseki ngendlela abathameli bomcimbi i Ugu jazz festival abaziphatha ngayo nangendlela okugcina izitshalo zabo zikhahlamezeke ngayo ngemuva kwalomcimbi.
Lokhu kuvele ngesikhathi abahleli bomcimbi i Ugu Jazz festival bebambe umhlangano namalunga omphakathi kanye nezinhlaka ezithintekayo uma kwenziwa lomcimbi oba minyaka yonke nolindeleke ukuba ube ngenyanga ezayo u June mhla zingama-28.
Omunye umnikazi wepulazi elakhele lenkundla ukhale kakhulu ngokuthi imfuyo ike ihlukumezeke kakhulu ngenxa yezinga lomsindo athi bawuzwa ngisho besezindlini, uthi bezwa ngisho izinhlamvu zamagama abantu bekhuluma kanye nezinga lomculo elisuke liphezulu kakhulu.
Lomnikazi wepulazi uphinde wakhala ngokuthi izimoto zigcina selimaza ngisho izitshalo ngenxa yobuningi, nathe uma eziphendulela uMnu Sya Msomi ongumphathi wenkampane iCyassound Holdings ukubeka kwacaca ukuthi ingakho benze izinhlelo zokuthi izimoto zipakwe ndawana thize kuze zingagcini seziningi zize zilimaze nezitshalo.
UMnu Syabonga Msomi utshele amalunga omphakathi kanye nalezi zinhlaka ezithintekayo ukuthi kunohlaka abasebenzisana nalo nathe lingu section 15 wathi ngokwalo umcimbi kumele uphele ngehora lika-4 ekuseni njengalokhu kade kunezikhalazo zokuthi lomcimbi udonsa kuze kuse.
Kanti uphinde wagcizelela ukuthi bazokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi bashiya inkundla kanye nezindawo eziyakhele zihlanzekile kuze kevikeleke indalo